Qoraal walba Qaracanka Qarankaaga wiilkiisa Qorsheeyay ma diidantahay in aad Qiratid?arnigiisa, Qalin walba Qisadiisa, ee aqrist | Somaale.com
Qoraal walba Qaracanka Qarankaaga wiilkiisa Qorsheeyay ma diidantahay in aad Qiratid?arnigiisa, Qalin walba Qisadiisa, ee aqrist
Laailaaaha ilalaaaaah ilalaahu!!! dhiig ayaa isku darsamay. Wax aan sameeyo iyo meel aan lug u dhaqaajiyo ayaan aqoon waayay, guriga yaa iiga horeeyo? Dadka oo dhan ashahaatan ayeey ku jiraan, oo markiiba waa nagula soo xoomay, raggii shaqalahiisa ahaa ayaa yimid oo u qaaday isbitaalka, anna meeshii ayaan taagnaa saacadu istaagtay sida qof koronto ku dhegtay, oo kale qof i dhaqajiso waa la waayay. Waxaa la wacay walaalkey iga wayn, oo yimid, asigaa i soo waday, warna uma haynin waxa ka dhacay gurigayga. Waxaan nimid gurigii oo isku dumay, iyo gabadhii adeegtada aheeyd oo kaligeed banaanka taagantahay, iskana ooyneyso, deriskii iyo wixii dad na yaqaanane ay calaacal ku jiraan iyo ba’ayeysi. Gudaha ayaan soo galay kaligay, anigoo rumeysan la’a in sadaxdaydii cunug iyo ayeeyadood uu hal madfac iga dilay, kaligayna ii tagay dunida. Waxaan u imid dhiigooda, lug, gacan meel taalo, iyo madax meel yaalo oo aan aqaano, meel la qaban karay kuma aysan oolin ayaga dhan, oo waxaan xasuustaa in hilibkooda dhulka laga gurbiyay, hal godna lagu wada duugay ilmahaygii iyo hooyadoodii labaad. Yaa Allaah! Meeqo sanno ayaa waalidiin sidaan caruurtooda jirkooda dhulka ugu soo gurbinaayeen, una sii gurbin doonaan? Ma arki doonaa Muqdhisho, oo caruurta yaryar ayagoo labiskooda iskool iyo boorsadahooda wata, walwalna ka muuqanin, ubaxyada iyo geedaha quruxda badan dhex yaacaayan?. Waa riyoonaa dabcan, inta ay noolyihiin ragga calooshood xakuntaa, ragga caqligooda iyo damiirkooda uusan is aqoonin, ma dhici doonto Nabad,? madfacna ma joogsan doono?. Aniga waa quustay, sababta aan u quustayna waa mid cad, hadane ma dhahaayo hala ila rajo dhigo dadoow!
Waxaan si dhaqsi leh u imid isbitaalkii ninkayga la geeyay. Shaqaalaha isbitaalka iyo tacsidooda tirada badan naxdintayda ayeey sii badsheen, waan sii quustay, waxaa iga soo hor baxay dhaqtar caan ku ah qaliinka iyo badbaadinta dhaawacyada noocan ah, aadna aan si shaqsi ah iskugu naqaano, iguna yiri: ” Fartuun is deji, is koontarool, xiligaan uma baahnid ooyin iyo daciifnimo in aad muujisid. Gal musqushaas iska soo dhaq wajiga, iina soo laabo adigoo ah Fartuun Cilmi Yaasiin! Waqti ma jiro ee dhaqso!” Feker la’aan ayaan amarkiisa qaatay, wajigaygii oo isla gaduutay, iska soo dhaqay iskagana tirtiray jalbaabkii aan watay. Waxaan imid asigoo ii keenay kursi, oo ay la joogto marwo kale oo ayadane dhaqtarad qaliin ah. Dhaqtaradii ayaa warka bilaawday oo tiri: ” Waa sax xaalada ninkaaga waa xuntahay, hada gacantayna ayuu ku jiraa, go,aan ayuuna gaaraa Dr Saciid ku saabsan in aan dibada u direeyno iyo in aan anaga daaweeyn karno daqiiqadaha soo socdo. Waxaad ogaataa in lacag milyanis ah ku baxi doonto badbaadadiisa,. Wiilka ah dumaashigaa daqiiqado ka hor ayuu naga tagay asigoo ku qanacsaneen inuu bixiyo lacagta loo sheegay.” Hadane Dr Muxyadiin ayaa hadalkii qaatay oo yiri: ” Sax, maxaad rabtaa adi? Isbitaalkaan ma bixin karo lacagtaas, mana heeyno qalabkaas wax noo soo celinaayo. Marka go,aan ayaan kaa rabnaa adiga?”
Tii horaba ka daran, dad in ay dilaan rabaan aa ? Yaa waaye?. Anigoonan is adkeeynaayo ayaa ka qatay telefan oo wacay wiilka ka ahaa qasnajiga iyo xisaabiyaha guud shirkada ninkayga, kuna amray inuu ii keeno lacagta uu haayo oo dhan, shirkadaha iyo bankiyada lacagta deeyntaa ku maqantahay inta waco ku amro in aysan siin karin lacag qof aan aniga aheeyn, waxuuna ii sheegay in uu shan iyo tobin daqiiqo gudahooda ila joogo. Dr Muxyadiin ayaa igu yiri: ” Ma rabo in aan ku cabsi gelsho, laakiin intii aad aheeyd hooyada guri joogta wax badan ayaa is bedelay, ee iska jir in aad kaligaa socotid, waxkasta ayaa dhici karo. Anaga hada waxaan horay ka geleeynaa qaliinkiisa. Iga soo wac telefaankaan markasta oo aad dareentid wax qaldan, xaaladiisa caafimaad saacad saacad ayaan kuula soo socodsiineeynaa… ogaaw in aadna kaligaa aheeyn oo aan garabkaaga nahay markasta!” Waa iga tageen, ayagoo qofkasta murugsanyahay. Waxaan galay feker. Yaa waaye dadka rabo in ay ninkayga dilaan? Goormuu yeeshay cadawga aan ogeen ? Aniga musiibada maxeey ii daba socotaa halkaan maalin? Yaa Illaahii, ii gargaar. Waxaa ka soo wareegtay todobo saacadood oo kaliya markay dadka hada dunida ka maqan ay ii qoslaayeen, ii shushuminaayeen, hadane ma hadli karaaan, ma is dhaqaajin karaan aa. Hal mar ayuu feker igu soo dhacay, waa istaagay, wiil kamid ah ilaaliyaasha oo aan aqaano ayaan ku iri:” Ii keen taksi, yaanan la ogaanin in aan ka baxay isbitalkana fadlan!”
Inta uusan taksigii imaanin ayaa telefankaygii soo dhacay, waa gabadhii adeegtada ka heeyd oo ayadoo ooyneeyso weli igu tiri: ” Fartuun ilmahaaga ma ahan waxa madfaca dilay, nin ayaa watay, waa la watay, waa la afduubtay, iihi iihi, ma dhimanin ma i maqleeysiin adinka?” Yaah! Waa isla qaboobay, ma waalatay oo aragga foosha xun oo ay ku aragtay ilmaha ayaad la qafiifitay ayaan is iri? Laakiin ilmahayga gacmahooda iyo lugahooda oo aan aqaano ayeey ahaayeen waxa aan arkay? Waa sii wareeray qorshihii aan waday waa iga halaabay, taksigiina waa yimid. Ka waran hadii ay run tahay oo ay noolyihiin? Ma dhici karto? Waa dhici kartaa, ninkaaga cadaw rabo inuu dilo hadii uu jiro, mid ilmahiisa afduubanaa maa la weeynaa?. Intee geeysteen ilmaha marka? Isla hadalkaygii iyo walaacaygii waan kusii dhex waashay ilaa taksigii hor istaagay filadii weeyneed ee aan u socday…………………………….………………………
Qaybtii 2aad ee qisadii:”Ila OOY!!!” W/Q Ifraax Yusuf ( Ifka)
Qoraal walba Qarnigiisa, Qalin walba Qisadiisa, ee aqriste Qaracanka Qarankaaga wiilkiisa Qorsheeyay ma diidantahay in aad Qiratid?
Ciidamada Doowlada Ee Beeydhabo oo la qarxiyay 0
Ra'iisul Wasaare Gaas iyo Agoustine Mahiga oo ka qeyb galay kulanka odayaasha dhaqanka 0